Warshad dayactir - Shiinaha Soo-saareyaal iyo Alaab-qeybiyeyaal
Huzhou YUANTUO waa shirkad injineernimada farsamada ku takhasustay R & D, naqshadeynta iyo soo saarista dhammaan noocyada qalabka otomaatiga gaadiidka, qalabka keydka saadka iyo qeybaha. Ganacsigu wuxuu ku lug leeyahay naqshadeynta iyo soo saarista dhammaan noocyada hal mishiinnada iyo qaybaha dayactirka, isku xirka iyo isku xirnaanta mashiinno badan, iyo baaritaanka goobta, qorsheynta iyo horumarinta injineernimada nidaamka. Soosaarida qalab macquul ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa ah masuuliyadeena ...
Astaamaha alaabada cagta ee koobka: 1. Waxyaabaha alaabta: sheygu wuxuu ka sameysan yahay bir kaarboon ah, daaweynta dusha sarena waa ikhtiyaar (zinc / nickel / chromium / blackening / pulse paint) ama 202/304 ahama waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo qaabka sawirka 3. Baaxadda isticmaalka: Badeecadan taxanaha ahi waxay ku habboon yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee mashiinnada culus, mishiinnada cuntada, qalabka caafimaadka, armaajooyinka, iwm. 4. Faa'iidooyinka badeecadda: badeecaddu waxay leedahay awood qaadid sare, c ...
Waxyaabaha taxanaha ah ee Fulailun waa kuwo yar yar oo miisaankoodu yahay fudeyd, kuna habboon in alaabada lagu gudbiyo sagxad fidsan. Badanaa waxaa loo isticmaalaa qaybta foorarka ee nidaamka gudbinta ama qaybta leexinta iyo isku-xirnaanta, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa waardiye ama hage labada dhinac ee rarka. Fulai pulley sidoo kale waxaa loo isticmaalaa tuuriyeyaasha, oo waliba door caawiye ah ka qaadan kara gaadiidleyda badan, sida qaybta koreysa ee fuulista suunka fuulista suunka, iwm. Safka isku imaatinka, Fulai wheel waa w ...